Erayada aasaasiga ah ee Cuba | Safarka Absolut
Erayada aasaasiga ah ee Cuba
Luis Martinez | | Cuba
Ogaanshaha ereyada Cuba ee aasaasiga ah waxay kaa caawin doontaa inaad si fiican u fahamto waxay kuu sheegayaan goorta safarada jasiiradda Antillean. Sababta oo ah, inkasta oo luqadda rasmiga ah ee dalku tahay Español, waxay leedahay saameyn kala duwan oo siisay waxyaabo badan oo u gaar ah hadalka.
Xaqiiqdii, Isbaanishka looga hadlo Kuuba waa natiijada ay keeneen gumeystayaasha gunta. Laakiin sidoo kale waxaa loo qaabeeyey iyadoo la raacayo shuruudaha taino, luqadda ay ku hadlaan jasiiradaha asaliga ah; ereyo laga keenay afrikaanka kuwaas oo u yimid aagga addoomo ahaan iyo ugu dambeyntiina, saameyntii ku xigtay American mar ay ka xoroobeen Spain. Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad si fiican u ogaato ereyada aasaasiga ah ee Cuba ama cubanisms, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad sii wadato aqrinta.
1 Nidaamaynta ereyada aasaasiga ah ee Cuba
2 Ereyada ugu badan ee ereyada aasaasiga ah ee Cuba
2.1 Heshiiska bulshada
2.2 Galmada ku jirta ereyada aasaasiga ah ee Cuba
2.3 Midabka maqaarka
3 Astaamaha ku dhawaaqida
Nidaamaynta ereyada aasaasiga ah ee Cuba
Sida lahjadaha oo dhan iyo Cuba si wanaagsan ayaa loogu tixgelin karaa mid Isbaanish ah, ereyada aasaasiga ah ee aasaasiga ah waxaa lagu soo ururiyey qaamuusyo kala duwan. Kii ugu horreeyey, ee uu qoro muhaajiriinta reer Andalus, ayaa ahaa 'Tilmaamaha Xarfaha ee Cuba iyo Eraybixinta', oo lagu daabacay 1859.
Si kastaba ha noqotee, buugga tixraaca ee arrintan la xiriira ayaa ah 'Khudbadda Cuban ee Caanka ah ee Maanta', oo uu qoray qoraaga asluubta suuban Argelio Santiesteban, oo daabacaaddiisii ​​ugu horreysay ay billaabatay 1982-dii oo mar dambe dib loo daabacay.
Ereyada ugu badan ee ereyada aasaasiga ah ee Cuba
Erayada aasaasiga ah ee Cuba waxaa ku jira ereyo saameyn ku leh dhammaan qaybaha nolosha, laga bilaabo xiriirka bulshada ilaa qoyska iyada oo loo marayo shaqo, isboorti ama xitaa galmo. Waxaan arki doonnaa qaar ka mid ah waxyaabaha ugu xiisaha badan shuruudahaas.
Casa de la Trova oo ku taal Santiago de Cuba
Sidaad maqashay marar badan, Kuubbaa loo yaqaan «Hooyo» y "aabe" isla marka ay is aaminaan. Dhinaca kale, a "Asere" waa saaxiib ama lamaane, kaas oo ereyga sidoo kale loo adeegsado "Ambiya". Iyo, haddii aad mid ka mid tahay, waa inaad u baahatid "Guba tennis" maxaa yeelay waa xoogaa "Durañón". Waxaan ula jeedaa, ka tag dhaqso maxaa yeelay waxbaa bakhayl ah.
Waxa kale oo suurtogal ah, markaad saaxiibbada lajoogtay, inaad sigaar cabto a "rasaas" mise mid baad qaadatay "xusuusin". Si kale haddii loo dhigo, waxaad cabtay tubaakada ama waxoogaa aad u badan ayaad cabtay. Waxaa laga yaabaa in tan dambe ay sabab u ahayd xaqiiqda ah inaad qaadatay "Laguer" (biir) xad dhaaf ah
Sidoo kale wadada, waxaad ka heli kartaa a "Waan gubanayaa", oo macnaheedu yahay waalan, ama leh a "Sanaco", taasi waa doqon. Laakiin sidoo kale waxaad yeelan kartaa shaqaale ah a "Jerk" (caajis) ama uu qaatay go'aanno xun oo uu ku dhammaaday "taangiga", oo ah xabsi.
Dhanka kale, a Singao waa qof xun oo aan waligiis Wuxuu "tuuri doonaa xarig", taasi waa, kuuma caawin doono. Taabadalkeed, a "Ocambo" waa nin oday ah; a "Cricket" naag leh soo jiidasho yar oo laga yaabo inaadan rabin "xiro" (ma rabto inaad ku guuleysato); mid leh "Aguaje" isagu waa khayaano iyo a "Cod" qof aad u dhuuban.
Galmada ku jirta ereyada aasaasiga ah ee Cuba
Mid ka mid ah beeraha dheeriga ah lahjad kasta waa tan tilmaamaysa waxyaabaha galmada ka kooban. Erayada aasaasiga ah ee Cuba ma noqon doonin kuwa ka reeban. Tusaale ahaan, "Inaad cunto ku jirto" si sax ah macnaheedu waa ka fogaanshaha galmada, «Kasoo rar kaydadka» waa biyo bixid iyo "Qoob ka ciyaarka shanta Latinos" waxaa loola jeedaa siigaysashada.
Sigaar ku sameynta Santiago
Dhinaca kale, "Xoq rinjiga" macnaheedu waa in aan aamin ahayn, ee «Bayú» Waa dhillo iyo a «Jinetera» dhillo. Ku "bun" ama "papaya" waa madaahibta xubinta galmada dumarka, halka "Pinga", ka "Yucca" ama "yam" waa xubinta taranka ragga. Sidaad qiyaasi karto, waxaa jira ereyo kale oo badan oo loo qoondeeyo. Tusaale ahaan, "Chocha", "Cod", "Siilka" o "Wadar" kii ugu horreeyay iyo "markab", "xaabo", "gabal", "Bláncamo" o "Morronga" tan labaad. Arrin xiiso leh, dhammaan luuqadaha adduunka ayaa leh magac been ah oo aan dhammaad lahayn iyaga.
Taariikhda Cuba waxay u horseedday dadka hadda deggan inay yeelato kala duwanaansho ballaaran oo jinsiyeed. Iyo xitaa, kuwan dhexdooda, muuqaallo kala duwan oo ereyada ereyada ay mas'uul ka ahaayeen kala sooc leh saxnaanta.
Marka, a "Adag" ama a "Bunni" Waa nin madow, laakiin a "Mulatón" Waxay isugu jirtaa madow iyo mulatto. Sidoo kale, a "Jabao" Isagu waa mestizo leh maqaar, indho iyo timo khafiif ah, in kasta oo, haddii uu midab cad yahay, loo yeedhi doono «Capirro», iyo a «Qisooyin» Waa qof Aasiya ama indho sarcaad leh.
Mid kale oo ka mid ah lahjadaha macnaha badan ee lahjadaha ereyada aasaasiga ah ee Cuba waa ereyada tixraacaya lacagta. Tusaale ahaan, "Guansa" Waa midka suuqa madow loogu isticmaalo wax ku iibsiga iyo iibinta; "Juaniquiqui" waxaa loola jeedaa peso-kii Cuba; "Moni" wuxuu ka helayaa lacag Ingiriisiga iyo "qaraha" waxay muujineysaa raasamaal in kastoo sidoo kale la isticmaalo "Stilla".
Dhinaca kale, a "nun" waa shan biil oo peso ah. Si kastaba ha noqotee, in laga hadlo dollar waxay yiraahdaan "cagaar" oo inta badan iyaga siiya a "Yuma", erey macnihiisu yahay Mareykan.
Astaamaha ku dhawaaqida
Sidoo kale waa inaad ogaataa in dadka reer Cuba ay leeyihiin waxyaabo gaar ah oo loogu dhawaaqayo. Kuwani kuguma adkaan doonaan inaad fahanto iyaga, laakiin shaki la'aan waxay soo jiidan doonaan dareenkaaga oo ogaanshaha iyaga ayaa kaa caawin doona inaad si wanaagsan ula qabsato iyaga.
Waxyaabahaas gaarka ah oo dhan, labo ayaa taagan oo labaduba waa inay ku xirnaadaan r. Midka koowaad waa beddelaya tan markii ay u muuqato dhammaadka l. Tusaale ahaan, waad maqashay inay leeyihiin "Amol" halkii jacayl. Ta labaadna waa wicitaanka cirridka r. Waxay ka kooban tahay in tan lagu milmay shibbanaha raacsan. Tusaale ahaan, halkii albaab laga siin lahaa, waxay dhahaan "Puetta".
Muuqaal kale oo guud waa tirtirka s markay shaqalka kadib raacdo. Marka, halkii aad ka odhan lahayd, way dhawaaqaan "Dheh". Iyo, dabcan, Cuba waa wax caadi ah seseo, taasi waa, ku dhawaaqida s bedelkii coz ka hor e, i.
Gebogebo, ereyada aasaasiga ah ee Cuba, midkaas oo ah Antilleans waxay bixiyeen luuqada Isbaanishka, waa mid ka mid ah kuwa ugu taajirsan Latin America. Haddii aad rabto inaad booqato waddanka, way kugu fiicnaan doontaa inaad ogaato ugu yaraan qayb ka mid ah ereyadan, haddii kale waxaad u malayn doontaa inay kugula hadlayaan luqad kale waxaadna u ekaan kartaa Guanajo (doqon) yaa leh Waxay "sameeyaan maqaar" (majaajillo)
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Erayada aasaasiga ah ee Cuba
Julio Aguila Castro dijo
Waxay ila tahay aniga muhiim inay Cubans-ku ku kordhiyeen Cubanism-ka boggan, in badan oo dalxiisayaal ah ayaa u hadhay afkooda oo furan mana ogin waxa ay noo sheegaan iyo waxa looga jawaabayo. Babahoyo, Diseembar 2, 2015
Jawaab Julio Aguila Castro
Addoomada Giriiggii Hore
Miyay ku jireen addoomo Masar hore?